रोनाल्डोको छोराको मृत्यु ! « Online Tv Nepal
रोनाल्डोको छोराको मृत्यु !
Published : 19 April, 2022 2:37 pm
क्रिष्टियानो रोनाल्डो र जर्जिना रोड्रिग्वेजले गत वर्ष अक्टोबरमा आमाबुवा बन्न लागेको घोषणा गरेका थिए। म्यानचेस्टर युनाइटेडका फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो र जर्जिना रोड्रिग्वेजले आफ्नो नवजात छोरा गुमाएका छन्। क्रिस्टियानोले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना फ्यानहरूलाई यो दुखद दुर्घटनाको जानकारी दिएका हुन्।
पोर्चुगिज नागरिक रोनाल्डो र उनकी २८ वर्षीया श्रिमती जर्जिना रोड्रिग्वेज जुम्ल्याहा बच्चाको आमाबुवा बन्न लागेका थिए। उनीहरुकी छोरी सकुशल छन्। रोनाल्डो र जर्जिना ले यो दुःखमा पनि छोरी साथमा भएकीले केही आशा दिएको बताए। क्रिस्टियानोले इन्स्टाग्राममा लेखेका छन्, ‘धेरै दु:खका साथ यो भन्नुपर्छ कि हाम्रो छोरा यो संसारमा रहेन। हामी यो घटनाले गहिरो पीडामा छौं र यो समस्याको समयमा हाम्रो गोपनीयताको सम्मान गर्न अपील गर्दछौं।’
क्रिस्टियानोको यो पोस्टपछि विश्वभरका उनका फ्यानहरुले उनलाई माया र समवेदना पठाइरहेका छन्। रोनाल्डो सन् २०१० मा पहिलोपटक पिता बनेका थिए। उनको छोराको नाम क्रिस्टियानो जुनियर हो। यसपछि सन् २०१७ मा क्रिस्टियानो जुम्ल्याहा सन्तानको पिता बनेका थिए। क्रिस्टियानोको जर्जिना रोड्रिग्वेजसँग पनि पहिला जन्मिएकी एक छोरी छिन्। उनको जन्म २०१७ मा भएको थियो।
बालेन शाहले कटाए १० हजार मत…..(भिडियो)
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहले १० हजार मत कटाएका छन्।उनले अहिलेसम्म १०२४१
केशव स्थापित भन्छन्- लेखेर राख्नुस् जित्ने मैले नै हो, बालेन तेस्रो हुन्छ….(भिडियो)
काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना जारी छ। मतगणना सुरू भएदेखि नै स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले अग्रता लिइरहेका
युवतीहरु संग भोट माग्दै बालेन हेर्नुस, घर घरमा पुग्दा यस्तो नसोचेको क्रेज देखियो…..(भिडियो सहित)
आज काठमाडौँ वार्ड नम्बर ६ तिर सिफल, कालोपुल, हाडीगाउँ मा बालेन शाह को घरदैलो कार्यक्रम